16 Jul 11:42 AM
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले अप्रत्याशित रुपमा आएको भीषण बाढीबाट पीडित बनेकालाई राहतमा जुट्न सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।
16 Jul 11:36 AM
16 Jul 10:32 AM
बैंकिङ उद्योगको बजार संरचना कस्तो खालको हुने ? धेरै बैंक राख्ने राख्ने कि थोरै राख्ने ? कतिवटा राख्ने ? भन्ने समस्या विश्वभरी रहेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले बताएका छन् । उनले यो प्रश्न नेपालमा मात्रै सामना गरेको नभएर धेरै विकसित देशमा पनि यही प्रश्न रहेको बताएका छन् ।
निरन्तरकाे वर्षाका कारण ललितपुरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । ठाउँठाउँमा गएको पहिरो हटाउन नसक्दा दक्षिण ललितपुरमा पर्ने तीन गाउँपालिकामा सडक अवरुद्ध भएर यातायात ठप्प भएको छ ।
16 Jul 09:44 AM
भीषण वर्षापछिको बाढीपहिरोले हिमाली जिल्ला मनाङको यात्रा असहज बनेको छ । मनाङबाट आउँदै गरेका र उता जाँदै गरेका यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
16 Jul 12:00 PM
16 Jul 11:14 AM